Ịzụ na Ire Ihe Ndị Na-eme Ka Nri Tọọ Ụtọ n’Indoneshia
N’IHE dị ka narị afọ ise gara aga, ihe na-eme ka nri tọọ ụtọ a na-azụ ma na-ere n’ebe dị iche iche n’ụwa mere ka ọtụtụ mba nwee ego otú ahụ mmanụ ụgbọala na-eme taa. Ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ na-eme ka nri tọọ ụtọ bụ nọtmeg na klovs. Ebe e si enweta ha n’oge ahụ bụ n’agwaetiti ndị a na-akpọ Agwaetiti Spaịz. Ihe a na-akpọ ha ugbu a bụ Maluku na Ebe Ugwu Maluku n’Indoneshia. N’oge ahụ, a na-ereta ihe ndị a na-eme ka nri tọọ ụtọ ezigbo ego na Yurop.
Ndị na-eme nchọpụta aha ha bụ Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Samuel de Champlain, na Henry Hudson chọchara ụzọ ndị ha ga-esi gaa n’Agwaetiti Spaịz. Ọ bụ ebe ndị mmadụ na-achọ ihe ndị e ji eme ka nri tọọ ụtọ sí Indoneshia ka ha nọ mata otú ụwa a dị.